Tsy Mahasakana ny “Revolisiona Maroloko” Ao Makedonia Ny Fandrahonana Fiampangana Heloka Bevava · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jona 2016 15:43 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, عربي, English
Mpanao fihetsiketsehana mandoko ny tsangambaton'i Alexander Lehibe amin'ny alalan'ny fampiasana basirano. Sary avy amin'i Vančo Džambaski, CC BY-NC-SA.
Nilaza ireo mpanao fihetsiketsehana ao amin'ny “Revolisiona Maroloko” ao Makedonia fa tsy atahoran'izy ireo ny fanambaran'ny polisy milaza fa hiampanga noho ny heloka bevava amin'ireo sahisahy indrindra amin'izy ireo ny polisy. Ny fihetsiketsehana manohitra ny kolikoly, na dia tsy misy herisetra aza dia lavitry ny tsy mihetsika, ary ahitana diabe, fampisehoana, ary fanipazana loko any amin'ireo zavatra mariky ny tsimatimanota sy ny fitantanana tsy mahomby ataon'ny fitondrana. Araka ny filazan'ny manam-pahaizana, tsy ara-dalàna ny fiampangana raha jerena amin'ny fomba fijery maro.
Eo ambanin'ny lalàna Makedoniana, sokajiana ho heloka ny ‘fandokoana’, miaraka amin'ny lamandy 50 Euros (58 Dolara Amerikana), raha misy voasambotry ny polisy manao fanamiana na ny mpanara-maso manao fanamiana sivily. Miantso ny olona voarohirohy amin'ny fandokoana, tsy araka ny lalàna, hatao famotorana ny polisy. Raisin'ireo mpanao fihetsiketsehana ho endrika fampitahorana izany izay, raha ny marina, atosiky ny fahatezerana sy ny fitomboan'ny isan'izy ireo.
Raha notontosaina tao amin'ny tanàna 20 mahery manerana an'i Makedonia ny ‘Revolisiona Maroloko’, miha-matetika sy mihamafy izany tao an-drenivohitra, Skopje, sy tao amin'ny tanàna faharoa lehibe indrindra, Bitola. Tamin'ny Zoma 3 Jiona, nampitombo ny teritery ny polisy tamin'ny alalan'ny fanambarana ny fikasan'izy ireo hiampanga ireo mpanao fihetsiketsehana fito tao Skopje sy ireo mpanao fihetsiketsehana 26 tao Bitola. Nahatonga ny toe-draharaha ho mihamafy izany – raha toa ka mankatoa ny famotorana momba izany fiampangana izany ny mpampanoa lalàna, mety hisy ny fisamborana, fitazonana azy ireo ary mety hiafara koa amin'ny sazy an-tranomaizina.
Ny antony nolazaina tamin'ny fiampangana dia “fandraisana anjara miaraka amin'ny andian'olona manao heloka bevava”, ny fihetsika “manimba vakoka ara-kolontsaina.” Ireo zavatra tiana ambara dia ny Tranoben'ny Minisiteran'ny Kolontsaina sy ny Lohalambon'ny Fandresena any Skopje, ary “fanimbana fananana iombonana” tao Bitola.
Nametraka fitoriana heloka bevava amin'ireo olona fito voarohirohy ho nandray anjara tamin'ny fihetsika mahavoaheloka bevava tany amin'ny Mpampanoa lalànan'ny Fanjakana ny Sampan'ny Heloka Bevava Maherisetra ao amin'ny Sampana Raharaha Anatiny ao Skopje. Noterena tamin'ireo olona P.B., M.Z. I.M., S.S.K, A.G., ary N.P avy ao Skopje, ary koa A.K. avy ao Ohrid ireo fiampangana amin'ny heloka bevava.
Ho setrin'ny fanambarana, nanohy nanao zavatra isan'andro ireo mpanao fihetsiketsehana tamin'ny fitangoronana amin'ny 6 ora hariva eo anoloan'ny biraon'ny Lehiben'ny Fampanoavam-panjakana Manokana, manao diabe sy sary hosodoko, ary mampiasa baka-filesy alefan'olombelona mba hipaka lavitra kokoa, toy ny foiben'ny governemanta. Hoy ny vakin'ny sorabaventy tamin'io andro io : “Miampanga fatratra ny Antoko Meloka” manondro ny tsimatimanota amin'ireo mpitondra sasany ao Makedonia izay ahiahiana ho nanao heloka bevava goavana.
Namorona baoritra nohetezana ‘tava any an-davaka’ ahafahan'ny mpanohana fihetsiketsehana mahazo ny sariny tamin'ny ihany ‘fitoratoraham-bato tamin'ny filesy’ koa ireo mpanao fihetsiketsehana.
Satria nanonona ireo fito “nofidiana” tamin'ny fanafohezana ny anaran'izy ireo ny fanambaran'ny polisy, nandoko ny T-shirt-n'izy ireo tamin'ny fanafohezana ny anaran'izy ireo ny mpanao fihetsiketsehana talohan'ny hanombohan'ny diabe, mba ho mariky ny fihantsiana.
Mpanao fihetsiketsehana voampanga nandoko ny t-shirt-n'izy ireo amin'ny fanafohezana ny anaran'izy ireo. Sary avy amin'i Vančo Džambaski, CC BY-NC-SA.
Niditra tamin'ny diabe mahazatra avy eo ireo mpanao fihetsiketsehana, nitsidika ny foiben'ny governemanta ary nampiasa baka-flesy mba hitoraka loko bebe kokoa eo anoloan'ny tranobe nohavaozina vao haingana.
Nandoko ny tranoben'ny governemanta ihany koa ny Revolisiona Maroloko androany hariva
Taorian'izany, tonga tany amin'ny kianja lehibe ao Skopje ny fihetsiketsehana, ary nanomboka nandoko ny iray amin'ireo tsangambato lehibe indrindra tamin'ny fitondran'i Nikola Gruevski- tsangambaton'i Alexander Lehibe, nomena anarana tamin'ny fomba ofisialy hoe “Mpiady Mpitaingi-tsoavaly”. Noho ny halafon'ny vidiny 8,2 tapitrisa Euros (eo amin'ny 9.3 tapitrisa dolara Amerikana eo), sokajiana ho mariky ny kolikoly sy ny fihoaram-pefin'ny governemanta ihany koa izany. Sambany ireo mpanao fihetsiketsehana niditra tao amin'ny loharano miboiboika mba hanosotra loko akaiky kokoa amin'ny fampiasana basirano.
Niditra tao amin'ny loharano miboiboika ao amin'ny tsangambaton'ny Mpiady Mpitaingi-tsoavaly ny mpanao fihetsiketsehana.
Niafara tamin'ny fifaliana ny fihetsiketsehana, satria nandrehitra balafomanga kely ihany koa ireo mpanao fihetsiketsehana mpandoko mavitrika indrindra. Tao amin'ny tranoben'ny Antenimiera no toerana farany nijanonana, izay voaloko bebe ihany koa.
Mpanao fihetsiketsehana amin'ny ‘Revolisiona Maroloko’ mandrehitra balafomanga kely eo anoloan'ny loharanon'i Alexander Lehibe ao Skopje. Sary avy amin'i Vančo Džambaski, CC BY-NC-SA.
Nametra-panontaniana momba ny fihetsiky ny polisy amin'ny antony roa ny mpahay lalàna sy ny manam-pahaizana hafa. Araka ny andininy faha-97 ao amin'ny lalàmpanorenan'i Makedonia, “Tokony tarihan'ny sivily izay efa olon-tsotra nandritra ny telo taona farafahakeliny ireo mpiasa ao amin'ny fitantanam-panjakana eo amin'ny sehatry ny fiarovana alohan'ny fifidianana azy ireo ao amin'io toerana io.” Polisy manamboninahitra ambonin'ny minisitry ny Fiarovana ankehitriny, Mitko Čavkov vao haingana. Araka ny filazan'ilay manam-pahaizana momba ny zon'olombelona, Profesora Mirjana Najčevska, PhD, mahatonga ny fanendrena azy tanteraka – sy ny didy rehetra nataony – ho tsy ara-dalàna sy tsy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana izany.
Fanampin'izany, araka ny filazan'ilay manampahaizana momba ny politika ara-kolontsaina, Profesora Donka Bardžieva, PhD, tsy afaka mahafantatra ny olom-pirenena fa nambara ho vakoka ara-kolontsaina ireo zavatra nolokoina, satria tsy nomarihana araka ny tokony ho izy izy ireo. Araka ny andininy faha-45 ao amin'ny Lalàna Fiarovana ny Vakoka Ara-kolontsaina, teren'ny lalàna hanamarika azy ireo (vakoka ara-kolontsaina) ao anatin'ny 60 andro amin'ny fanomezana azy ireo izany sata izany ny minisiteran'ny Kolontsaina. Ankoatra izany, araka ny andininy faha-174 ao amin'izany lalàna izany ihany, tsy maintsy mandoa onitra 810 hatramin'ny 240 Euros (920 hatramin'ny 2761 dolara Amerikana) ny minisitra sy ny olom-peheziny noho ny tsy fanarahan-dalàna.
Mandritra izany fotoana izany, mitohy ny hetsi-panoherana manerana an'i Makedonia. Tao amin'ny tambajotra sosialy, nisy ny vaovao eny ifotony nozaraina tamin'ny alalan'ny tenirohy #ColorfulRevolution sy #Macedonia amin'ny teny Anglisy, #ШаренаРеволуција sy #протестирам amin'ny teny Makedoniana, ary #RevolucioniLaraman sy #protestoj amin'ny teny Albaniana.